किन आउँछ एक्कासी आँधी जस्तो हावाहुरी ? - Saptakoshionline
किन आउँछ एक्कासी आँधी जस्तो हावाहुरी ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ०१, २०७६ समय: १३:०५:५८
किन आउँछ हावाहुरी र आँधी ?
चैत, वैशाख र जेठमा गर्मी हुन्छ । मनसुन सुरु हुनु भन्दा अगाडिको अवस्थामा दिउँसोपछि हावाहुरी, आँधी आउने र चट्याङ्ग समेत पर्छ । अहिले प्रिमनसुनको अवस्थामा एक मिटरदेखि डेढ मिटरप्रति सेकेण्ड हावा बहँदा सामान्य मानिन्छ । तर सामान्य अवस्थाको भन्दा तीब्र गतिमा बहन थाले हावाहुरी लागेको भन्ने गरिन्छ । मौसमविदका अनुसार चट्याङ्ग गराउने बादलका कारण यो बेलामा एक्कासी हावाहुरी चल्ने गर्छ ।
हावाहुरी सँगै पानी पार्ने यस्तो बादललाई क्युनोनिमस क्लाउड भनिन्छ । यस्तो बादल तल जमिनतिर आउनुलाई डाउनड्राफ्ट भनिन्छ । यही कारणले धुलो उड्ने गरी हावाहुरी लाग्छ । यसले नै चट्याङ्ग समेत उत्पन्न गर्छ । हावाहुरी र पानी सँगै चट्याङ्ग गराउने बादलको विकास भएपछि विभिन्न अवस्था हुँदै सकिने गर्दछ । त्यसैगरी चक्रवातको विकास हुँदा पनि अत्यन्तै ठूलो हुरी लागि जनधनको क्षति हुने गर्दछ । मनसुन सुरु नहुँदासम्म बिहान मौसम सफा भएपनि दिउँसो पछि हावाहुरी चल्ने सम्भावना हुन्छ । स्थानीय वायुको प्रभावका कारण विशेषगरी खोला, खोंचको आसपास र पहाडी क्षेत्रमा मौसम सफा रहेपनि एक्कासी तीब्र गतिमा हावाहुरी चल्ने भएकाले सचेत रहन आवश्यक छ ।
सावधानी अपनाउन नसकेमा यो बेला ठुलो धनजनको क्षति हुन्छ । तीब्र गतिमा चल्ने हावाका कारण रुखहरु ढल्ने तथा जस्ताको छाना उडाउने र दुर्घटनाको जोखिम हुने भएकाले सावधानी अपनाउन सकिन्छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डा. ऋषिराम शर्माका अनुसार स्थानीय वायुको प्रभावका कारण विशेषगरी खोला, खोंचको आसपास र पहाडी क्षेत्रमा मौसम सफा रहेपनि एक्कासी तीब्र गतिमा हावाहुरी चल्ने भएकाले सचेत रहन आवश्यक छ ।
सम्भावित जोखिमबाट कसरी जोगिने ?
प्रिमनसुनमा हुने अवस्थाबारे आफै सचेत रहनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो भन्नुहुन्छ विभागका महानिर्देशक शर्मा । त्यसका लागि आफू बसेको घर, घर बाहिर भएमा कुन ठाउँमा छु भनेर जोखिम पत्ता लगाउने किनभने हावाहुँरी, आधिँबेरी जुनसुकै बेला आउन सक्छ । घरभित्र भए ज्याल ढोका राम्ररी बन्द गरेर बस्ने ।
त्यस्तै घर बाहिर निस्कँदा शरीरलाई सुरक्षित गर्ने गरी पुरै छेक्ने कपडा लगाउने अनि सकिन्छ भने खुट्टामा जुत्ताको प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ । आकाश गड्याङगुडुङ्ग गरेपछि भ्याएसम्म घरभित्र पस्नुपर्छ । तर बिजुली पोलको आडमा र ठुला रुखमुनि बस्न हुँदैन ।
लकडाउनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी लाई होटल व्यवसायीको सहयोग
सरोज पौडेल/ बिराटनगर/ बिराटनगरमा रहेकोे नाङ्गलो म:म: लले लकडाउनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई खाजा खुवाएर सहयोग गरेका छन् । क...